‘पंकजले मसंग ३ पटक सिन्दुर पोते गरेको हो’ भन्दै प्रिन्जु पुगीन् पंकजकै घर (भिडियो हेर्नुस्) – Classic Khabar
August 6, 2021 223
पुर्वकी प्रिन्जुले आफुलाई पंकजले ३ पटक विवाह गरेको बताएका छन् । उनले पंकजसंग ३ पटक सिन्दुर पोते गरेको दावी गरेकी छन् । झापा बुधवारे निवासी प्रिन्जु भट्टराईलाई श्रीमती बनाएर विचल्ली पारेको भन्ने समाचार वाहिरिएको हो । प्रहरीवाट रिहा भएपछि पंकजले प्रिन्जुलाई पनि छोडेका छन् । उनलाई एक वर्ष सम्म श्रीमतीका रुपमा सबै अधिकार दिएर पंकजले सुनसरीमा राखेको बताएकी छन् ।
Prevपक्राउ परेका जाजरकोटका वडाध्यक्षले के दिए यस्तो वयान ? (भिडियो हेर्नुस्)
Nextयो त अति भएन र ? गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका ससुराको निधनमा गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा
म्याद सिधिएका सामान बेच्ने व्यापारीमाथि कारबाही शुरु